Ny milina laser laser Galvo dia ampiasaina amin'ny fanaovana sokitra, fanamarihana ary fanapahana lamba teknika, fitafiana, hoditra, kiraro, fiara, karipetra, taratasy fotsy, karatra taratasy, dokam-barotra ary indostria hafa.
Ampiana miaraka amin'ny loharano laser laser RF RF ary lohany Galvanometric haitao avo lenta, mampiasa teknolojia fanodinana galvanometra mifantoka telo-axis, ny rafitra Laser laser Goldenlaser's no mpitarika ny haavo teknolojia.
Ny rafitray laser Galvo dia natao ho an'ny fanodinana laser miaraka amin'ny haben'ny toerana tsara, faritra miasa lehibe ary malefaka avo. Izy io dia manana ny mampiavaka ny hafainganam-pandeha avo lenta sy tsy manam-paharoa raha ampitahaina amin'ny rafitra laser gantry (mpanafika laser axis XY).
Fanapahana Laser Galvo manidina feno sy milina fanamarihana miaraka amin'ny fakan-tsary
ZJJG-16060LD Galvo & gantry integrated laser machine dia manana làlana optique manidina feno, miaraka amina fantsom-boasary fitaratra sy fakan-tsary. Izy io dia tsimbadika ara-toekarena amin'ny JMCZJJG (3D) 170200LD.
Masinina Laser Galvo CO2 miaraka amin'ny mpanera amin'ny fanapahana sokitra
Rafitra laser Galvo mavitrika 3D
Fotoana fanodinana indray mandeha 450 × 450mm
Mahavita splicing seamless hatramin'ny 1600mm
SuperLAB | Masinina laser XY Gantry & Galvo misy fakan-tsary amin'ny Camera Camera
SuperLAB, marika laser mifangaro, sokitra laser ary fanapahana laser, dia foibe fanodinana laser ho an'ny tsy metaly. Izy io dia manana ny toeran'ny fametrahana ny fahitana, fanitsiana iray lehibe ary ny fifantohan'ny fiara…
Masinina fanoratana sokitra vita amin'ny hoditra Galvo tamin'ny alàlan'ny indostrian'ny kiraro
Hafainganam-pandeha ambony sy sary sokitra tamin'ny laser lehibe, perforating ary fanapahana. Rafitra mitondra fiara roa miaraka amin'ny rafitry ny boaty. Rafitra galvanometer nohavaozina.
Galvo Laser Cutting sy Perforating Machine ho an'ny Jersey Fabric
Masinina tamin'ny laser marobe izay afaka manapaka, manisy sokitra, manisy perforate ary manapaka amin'ny oroka, polyester, microfiber, na lamba mihinjitra aza.
Copyright © 2005-2021 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.